Dzokera paInvestment yeSEO | Martech Zone
NeChishanu, Gunyana 9, 2011 Svondo, October 4, 2015 Douglas Karr
Iyi infographic kubva ku DIYSEO pane yekutsvaga injini optimization inodzoka kune investment inogona kukwidza mimwe mibvunzo kupfuura iyo chaizvo mhinduro. Ndinogara ndichinyumwira pandinoona gumbeze chirevo chekuti chiteshi chimwe chiri nani kupfuura dzimwe dzese… sekunge uchifanira kusiya zvese zvinoshandiswa? Heano mamwe maonero:
Izvi zvaingoyerwa kubva pamushandirapamwe kamwe here? Mune mamwe mazwi… sezvavanenge vachiyera kukosheswa kweemail kushambadza, vari kuwedzera here muhupenyu hwese hweanonyorera uye nekutenga kwakatevera kwavachaita munzira? Ndinofunga vanogona kunge vakapotsa izvo!
Kubva pamasaiti maviri, iyi ndiyo mhedziso yemabhizinesi ese? Handifungi!
Yakanga iri mari yavo sei-purogiramu-yekudzvanya? Yaiva nemakore mangani? Ndezvipi zvavakawana? Vakasunga iwo chaiwo mameseji kune akasarudzika, kushandurwa akagadziriswa mapeji ekumhara kuti awedzere kudzoka?
Kukwikwidzana kwaive nemazwi akakosha uye zvakatora nguva yakareba sei kuti kambani inyore zvakanaka?
Iko kudyara muSEO kwakasanganisira mutengo wezvose zvirimo, dhizaini uye kusimudzira saiti mukuwedzera mukungogadzirisa iyo?
Ini handina mubvunzo kuti SEO inofanirwa kuve yakakosha pane chero online yekutengesa zano. Nekufamba kwenguva, iine pa-saiti optimization uye off-saiti kukwidziridzwa, kambani inogona kuwedzera zvakanyanya huwandu hwevatungamiriri, mhando yeaya anotungamira, uye kutyaira mutengo wega mutobvu pasi kuti kuwedzere Kudzoka paInvestment. IMO, zvakadaro, iyi infographic inogona kutungamira vamwe vanhu kune imwe mhedziso.
Sep 11, 2011 na12:53 PM
Iyo infographic yakatumirwa munaDecember we 2009. Kunyange zvazvo ndisingarevi kuti ruzivo rwakarurama kana kuti rusina kururama, data inowana stale mumusika uyu nokukurumidza nekuda kwekuchinja kwekombiyuta uye maitiro.
Social Media ine chokwadi ine chekuita paROI asi haina kuiswa mune iyi infographic.
Yave nguva yekutora imwe snapshot yeiyi data uye kuenzanisa. Layer social media kukanganisa mune graphic.
Sep 11, 2011 na6:27 PM
Mhinduro yakanaka, Patrick! Ndinobvuma - uye magariro enhau ave kukanganisa mibairo yekutsvaga saka mibairo ingatove yakatsveyama.